Yunivarsitoota walitti bu'iinsaan raafamaa jiran - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Barattooti akkassiin mooraa gadiisanii bahaa jiruu
Walitti bu'iinsa dhiheenya kana yunvarsitoota garaa garaa keessatti uumamee turee lubbuun barattootaa darbuun miidhaan qaamaa cimaa fi salphaanis qaqabeera.
Kana malees yunivarsitoota heddu keessatti barnoonni adda cituun gara maatii isaanii deebii'aa jiru.Eddoowwan garaa garaattis jaarsooliin haalicha tasgabeessuuf yaalii taasisan illeen, barattoonni deebii'uuf wabii maal qabnaaa jechuun gaaffii kaasaa jiru.
Yunivarsitoota keessatti maaltu uumamee?
Walitt bu'iinsa dhiheenya kanaas taatee deegartoota magaalaa maqaleefi kilabii spoortii magaalaa Waldiyaa jidduutti umammee ta'u akka hnollee shakkama.
Walitti bu'iinsa yunivarsitii Adigiraatiinis lubbuun barataa darbee jira.
Yunivarsitii Wallaggaa kaampaasii Shambuuttis lubbuun namoota lamaa kan badee yoo ta'u,yunvarsitii Dabra taaboriittis lubbuun nama tokkoo darbuusaa pireezidaantiin yunivarsitichaa Dr Alamaayoo Kabbadaa ejansii sabqunnamtii Amaaraatti himaniiru.
Yunivarsitii Baahir daariitti ammoo barattoonni kan madaa'aniifi hosipitaalaa walaanamaa jiraachu isaanii gabaasini eejjansichichaa ni mul'isa. Akkasumas yunivasitiiwwan Gondarii fi Waldiyaattis barattoonni madaa'anii akka jiran maddeen ni mul'isu.
Barattoonni yunivarsitiiwwan Baahir daariifi Dabra taaboor BBC'n bilbilaan dubbisees soodaa olaanaa akka qaban dubbatu.
Sababiidhuma soodaatiinis gara maatii isaanii deebii'uuf akka barbaadan dubbatu.
Yunivarsitiin Dabra Taaboor humnoota nagenyaatiin marfamee kan jiru yoo ta'u, barnoonnis dhaabbachu saa barattuun magaalaa finfiinneetii garas dhaqxe tokko himtee jirti.
Bulchiinsi yunivarsitichaa Wiixata akka jalqabamu beeksiisa maxxansuu illeen, wayita ammaatti dallaan baayyee kan qorreefi barattoota muraasni qofti akka jiran dubbattee jirti.
Wiixata tare alkan yunivarsitiin iyya olaanaa waan guutameef humnoonni nageenyaa galanii tasigabeessan illeen, Kibxata ammoo barattooonni mormiif bahusaanii dubbate jirti.
Barattoonni hedduunis guyyuma sana dallaa keessa akka bahanilleen himtee jirti.
Isheenis barnoonni yeroo gabaabaa keessa kan hineegalamne yoo ta'e gara maati Finfinneetti deebii'uu akka barbatti. Barattuunn goosa barnootaa maandisummaa bishaan kan biraa ammoo sodaadhaan gara maatii ishee galuu nutti himtee jirti.
Magaalaan nagaa ta'ulleen oduun yunivarsitoota keessaa garuu walitti bu'insii kan dhaabbatu hinfakkaatu, jechuun sodaa ishee ibsatte jirti.
Haaluma walfakkaatunis barattoonni wallagaa haalli akka hin tasgaboofne dubbatu. Yunivarsitoota Adigiraati keessatti barachaa kan jiranis gara maatii deebii'uuf akka barbaadan dubbatu.
Oggantoonni Yunivarsitootaa maal jedhuu?
Yunivarsitii Adigiraatiitti walitti bu'iinsa wayita guyyaa sabaafi sablamootaa kabajanitti muziiqaa irratti umameen, gara lola gareetti geedaramuun lubbuun barataa tokkoo darbeera.
Pirezidaantiin yunivarisitichaa Dr. Zaayid Nagaash barataa keenya dhabuutti baayyee gaddineera jechuun gada isaanii kan ibsatan yoo ta'u, jiraattooonni naannichaa fi magaalichaas gochicha mormaniiru.
Jaarsooliin haalicha tasgabeessuuf yaalii taasiisaa jiraachu isaanii fi haala barnoonni itt fufuun irrattis hojatamaa kan jiru ta'u Pirezidaantiin Dabra Taaboor Dr Alamaayoo Kabbada dubbataniiru.
Motummaan maal raawwate?
Ministirri Barnootaa Dr Tilaayee Geetuu Faanaatti akka himanitti, rakkoon nageenya tibbanaa kan barattoota ergama farra sirna ijaarsa dimokirasii fi misooma biyyattii raawwachisaniin umamee ta'uu dubbataniiru.
Rakkinnichi walxaxaa waan ta'eefu motummaan furmaata itti kennu akka qabaatus dubbataniiru.
Haalichaaf furmaata kennuufis komaandi poostiin sadarkaa federaalaatti qaamoolee adda addaa irraa babahuun ijaaramuu isaa caqasaniiru.
Barattoon sodaadhaan barnoota dhisani gara maatii deebii'aa waan jiranis, haalicha tasgabeessuuf jecha poolisiifi raayaan dhaabbilee barnootaatti akka argaman taasisamu illeen dubbataniiru.
Barattoonni barnoota isaanii irraa deebii'anillee akka gara barnoota isaanitti deebii'aniif abbaa taayitaa geejjibaa waliin ta'uun hojachaa jirras jedhaniiru.
Har'aa kaasees dhaabbilee barnootaa 22 irra deemuun oggantoota olaanoo yunivasitootaa waliin marii akka taasifamu Ministirichi dabaluun himanii turan.
Barbaachisummaa Waltajjii bilisaa
"Naanawwa yunivarsitootaatti maddi rakkoo bulchiinsaa fi wantoota biraa ta'u mala. Kunis waanuma qabatamaa biyya keessa jiru irraa kan maddeedha,'' jechuun BBc'tti kan hima pirezidaanti duraanii Dr Nagaasoo Gidaadaati.
Barattoonni gaaffii dhiyeessu danda'u. Mirga isaanitis. Mirga isaanii kana kabachifachuuf ammoo barattoonni ijaaramuufi bilisummaa barnootaa qabaachu qabu. Haala kanaan gaaffi isaanii dhiyeefachu kan danda'a," jedhaniiru.
Kanaaf ammoo waltajjiin umamu akka qabaatu amanu.
"Yoo haala akkasiintiin ta'e malee haala amma jiruun eessumaa gahamuun hindanda'amu,'' jedhaniiru.
Dhugumattu baratoonni mormii akka dhiyeessaniifi hiriira akka bahaniif heeyyamni kennamuuf qabaata.
Rakkinnichi haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e ammoo, barnoota gufachiisuu bira darbee rakkina biraa qabaachu mala jedhu Dr Nagaasoon.
"Haalli garee amma mul'ataa jiruu jibbaa fi itti aansees sanyii balleessu akka qaqabu malu soodaa qaban ibsaniiru.
Yunivarsitii Maqalleetti gargaaraa pirofessaraa kutaa barnootaa saayinsii siyaasaa fi qorannoo istraateejii, gaaffiin barattootaa ijaaramuun yaada ibsachu qofa osoo hintaane, lubbuu lamiilee balaa irratti argamu attamiin baraaraa kan jedhuu dha, jedhaniiru Obbo Sayifa Haayile.
Kana malees 'haala heerri motummaa hayyamuun haalli itti adda baanu mijachuu qabaatas,'' jedhuu Obbo Haayilee.
Dr Nagaasoon ammoo namoon foxxoquu barbaadan yoo jiraatan illeen ummanni garuu fedhii akka hinqabne amanu.
Kana malees rakkinicha gadi fageenyaan qorachuufi qaamni fala barbaadu jiraachu akka qabaatu dubbataniiru, Dr. Nagaasoon.
Rakkina amma umameef ittigaafatamaan paartii bulchaa jiruudha kan jedhan Obbo Sayifaan, motummaan dhimmicha keessa galuun daakaa kan jiruufi gama nama barateetiin ammoo dhiisaa kan jedhu dhabamu dubbatu Obbo Seefuun.